DHAMMAAN SHIRKADAHA LAGA BARTO DHAMMAAN DHAMMAAN DHAMMAAN, WAXAAN KA HELI KARAA SI LOO HELI KARO
Meral iyo Dharka Orange
Dharka Ciidda Cagaaran
Eeg Dhammaan Dharka
Eeg Dhammaan Boosaska
Garaaclaha iyo Gacmaha
Jimicsiyada iyo muraayadaha
Qoryaha loo yaqaan "Linen Shorts"
Kabaha Sayniska iyo Qoryaha
Ku saabsan dakhliyada
Raaxo aan laheyn qaab dhexdhexaad ah
Dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn
Qaadashada qaababka kala duwan
Rinjiyeynta Rinjiga Dharka Dhaawac dharka ah
Iibisay $ 90.40
Ii wargali marka badeecadani la heli karo:
Soo Celinta & Is-beddelka
Calaamadaynta:O-Neck Large Large
Size: Length Free: 94cm Bust: 138cm Calaamadeyn: 134cm Hem: 142cm
Length xiga: 29cm Cuff: 18cm
Bixinta Adduunka ee Bilaashka ah ee amarrada oo dhan. Ugu yaraan lama doonayo.
Waxaan u fududeynaa macaamiisheena maalmaha 30 Dayacan ama Dib u Beddelidda Gargaarka. Waxay kuu sahleysaa inaad iibsato walxo leh dabeecad aan fiicneyn oo leh khibrad wax ku ool ah oo ku taala Buddhatrends.
Beddelidda, Soo Celinta iyo Soo Celinta:
Si aad u soo celiso sheyga fadlan booqo boggayaga soo-celinta / is-dhaafsigahttps://www.buddhatrends.com/pages/returns-exchange
Waa qayb ka mid ah qasabka ka mid ah habka loo soo diro sawirrada sheyga waxyeelloobay / jabay. Waxay si weyn u caawineysaa haddii aad u dirto sawirro cad oo cillad ah.
Haddii alaabtu aanay khalad ahayn oo aad rabto inaad beddesho sababta oo ah cabbirka / midabka ama sheyga sheyga, waa la soo celin karaa hal mar. Qofka macaamilka ayaa masuul ka ah inuu bixiyo maraakiibta soo noqoshada, la socoshada iyo eedeymaha dib loo soo celiyo.
FADLAN FIIRO GAAR AH: Waxaanu ku soo sheegnay dhammaan faahfaahinta sawirada ee isku xirnaanta walxaha walxaha saxda saxda ah ee mitirka, fadlan calaamadee ka hor inta aanad amarka ku jirin iyo inaad iska ilaaliso wixii farxad ah ee ka dambeeya.
Nidaamka xakamaynta tayada ayaa ah mid aad loogu kalsoon yahay, laakiin dhacdooyinka aan la fileynin ayaa dhici kara. Marka ay dhacdo midab ama khadad qaldan, isla markiiba la xariir taageerada macaamiisha, sidoo kale na siiso sawirada sheyga si loo xalliyo dhibaatada sida ugu dhakhsaha badan.
Maskaxda ku hay in cinwaanka soo dirista iyo soo celinta ay ku xirantahay ku xiran tahay wadankaaga iyo saamiyada. Sidaa daraadeed, waxaan si xoog leh kugula talineynaa in aad raacdo habka nidaamkeena maareynta soo celinta sida faahfaahinta oo dhan, cinwaanka dib u celinta iyo tilmaamaha waxaa laga heli doonaa nidaamka maamulka soo celinta.
Xaaladda la isticmaalo, maydhay, waxyeello u gaysatay ama wixii kale ee wax ka bedelay xaaladda sheyga ee sheyga, ma xaqiijin karno natiijooyinka degdegga ah. Siyaasadda soo noqoshadu waxay si adag u qeexaysaa shuruudahan iyada oo qayb ka mid ah shuruudaha soo-celinta shayga Shey kasta oo aan lahayn xaalad asalka ah oo la socota baakidhka lama aqbalayo.
Isticmaal fursadaha maraakiibta qiimaha jaban ee laga heli karo wadankaaga. Xaaladda sheyga laga reebo caadooyinka, ma nagu khasbanaaneyno inaan bixino waajibaadka canshuurta / soo dejinta shayga.
Nidaamka dib u celinta, waa inaad ku sheegtaa xirmada sida "Qodobka Loo soo Celiyay 0 $ Qiime".
Wixii baajin ah ee shayga, waa inaad nala soo xiriirtaa saacadaha 12 ee meelaynta amarka. Alaabooyinka markas la soo diro lama tirtiri karo.
Soo celinta waxaa la soo saari karaa oo keliya haddii sheyga la soo celiyo xaalad asalka ah iyo xaalad aan la shaacin. Maya raadinta maya waa in la bixiyaa si loo xaq-daro lacag celinta.
Dib-u-celinta dib ayaa loo soo celinayaa iyadoo ku xiran macaamiisha habka mushaar-bixinta bilowga ah marka la samaynayo amarka. Soo celinta lacagta Paypal ayaa la sameeyaa isla maalintaas oo ah in alaabada dib loo soo celiyo cinwaanada soo-celinta ee laga yaabo inay kala duwanaan karto iyadoo ku xiran meesha macaamilka si looga fogaado kharashka maraakiibta sare. Kaarka Deynta (Credit Card Refunds) wuxuu qaadanayaa maalmaha 10-15 guud ahaan tan oo ah wakhtiga caadiga ah ee bangiga ee lacag celinta.
Kharashka dib u bixinta ayaa laga jari doonaa dhammaan soo-celinta / sarrifka / beddelka laakiin aan ka badnayn 25% wadarta qadarka wareegga.
Kooxdayada taageeradu marwalba waxay diyaar u yihiin in ay u fududeeyaan macaamiisha. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho bogga "Contact Us" wixii su'aalo ah, oo waanu ku faraxsanahay inaan kaa caawino xalinta dhibaatooyinkaaga.
Qabiilada Dharka Lacageed Lacageed
Qabiilada Dharka Lacageed Lacageed $ 69.68 $ 87.10
Hal cabbir / midab
Jet Black / Hal Mug Dusty Pink / One Size
Qalabka V Knight V Vest
Qalabka V Knight V Vest Iibisay $ 72.00
Dharka dharka dharka lagu xirto ee Loose Turtleneck
Dharka dharka dharka lagu xirto ee Loose Turtleneck $ 57.60 $ 72.00
Black / XL Black / 4XL Black / L Black / M Dub / XXL Madow / XXXL Khamrigu Red / XL Khamrigu Red / 4XL Khamrigu Red / L Khamrigu Red / M Khafiifka cas / Midab Wine Red / XXXL Ciidamada Green / XL Ciidamada Green / 4XL Ciidamada Green / L Ciidamada Green / M Ciidamada Cirka / Dhulka Army Green / XXXL Navy / XL Navy / 4XL Navy / L Navy / M Badda / Daawada Badda / XXXL
Shaati-nacniga Cas Casey
Shaati-nacniga Cas Casey $ 59.20 $ 74.00
Madow / hal Mug Gray / One Size
Waraaqo dhaadheer oo dhaadheer leh
Waraaqo dhaadheer oo dhaadheer leh Iibisay $ 78.00
Dharka Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Casriga ah
Dharka Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Casriga ah Iibisay $ 86.00
Turtleneck Dharka Dalbashada
Turtleneck Dharka Dalbashada $ 88.80 $ 111.00
Brown / One Size Gray / One Size
Dharka dharka jilicsan
Dharka dharka jilicsan Iibisay $ 86.00
Dharka Patchwork oo Dumarka ah Dhaawac Doolow
Dharka Patchwork oo Dumarka ah Dhaawac Doolow $ 134.10 $ 149.00
Daboolka sare ee la jajabiyey ee leh jilbaha dheer
Daboolka sare ee la jajabiyey ee leh jilbaha dheer $ 49.20 $ 82.00
Blue / One Size Madow / hal Mug
Dharka Jilicsan ee Neck Layla
Dharka Jilicsan ee Neck Layla $ 72.60 $ 121.00
Madow / hal Mug Burgundy / hal Size Beige / hal cabbir Dhalaal / Midab
Items dhawaan la eegay
Saxiix si aad u hesho ugu dambeeyay ee ku saabsan iibka, waxyaabo cusub iyo more ...